Echebe Coverall / mwepu Uwe
Mwepu Nwepu Uwe Okpuchi Okpukpo Okpuchi
Disposable Nwepu akpụkpọ ụkwụ Cover
Anti-Static echebe Clothing
Echebe Coverage Ya ...
mgbatị ịwa ahụ
Disposable ọgwụ echebe ...
Ntuziaka maka iji aha nchekwa ngwaahịa aha: Nleba anya na nchekwa / Nlereanya: Otu akụkụ, Nkọwapụta Coverage abụọ: 160 (S), 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL) ) Ngwakọta ihe owuwu Ngwaahịa a nwere ụdị abụọ: nkenke otu na nke abụọ, nke nwere mkpuchi, uwe na uwe ogologo ọkpa, nwere akwa nwere ụkwụ, nkwonkwo ụkwụ, mkpuchi na akwa, wee jiri mkpọchi mkpọchi onwe onye. Ngwaahịa na-abụghị akpali mmasị, disposable na sewn na Pee film mejupụtara ...
Ntuziaka maka iji mkpofu mkpuchi akwa aha ngwaahịa: mkpochapu mkpuchi gown Brand: SUREZEN Model / Specifications Model: SZ400 Blue color, reversible style. Nkọwapụta: S, M, L Nhazi usoro: Ngwaahịa anaghị emebi emebi, enwere ike wepu ya na ihe nkiri 43% SMS (15gms) 57% akwa akwa (20gms). 1. Ọdịdị: ọdịdị nke coverall ga-abụ akọrọ, dị ọcha na enweghị mildew. Enweghi adhesion, mgbape, oghere na ntụpọ ndị ọzọ n'elu. Nke st ...
Nchebe Coverage Na Okpomọkụ-akara Mezie
Ntuziaka maka iji nchekwa nchekwa na teepu mkpuchi akara Ngwaahịa Aha: Mkpuchi nchebe na teepu mkpuchi akara /dị ihe atụ / nkọwa nkọwa: Nkọwapụta Otu Otu: 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL) ) Ngwakọta ihe owuwu Ngwaahịa a bụ otu ngwungwu, nke nwere mkpuchi, uwe ogologo ọkpa, na mkpuchi akpụkpọ ụkwụ nwere akwa nwere ụkwụ, nkwonkwo ụkwụ, mkpuchi na akwa, wee jiri mkpọchi mkpọchi onwe onye. Seams ga-anọchi na okpomọkụ-akara teepu. Ngwaahịa bụ disposable ...
Anti Static Uwe
Ngwaahịa anyị na-egosipụta mmesapụ aka, nke dabara adaba n'obi na n'ubu, ntinye akwa na-agbanwe maka nkasi obi pụrụ iche, & zoro ezo na eriri na olu maka nchekwa kwesịrị ekwesị. Ewubere uwe a na-abaghị uru maka ịba uru, arụmọrụ & nlekọta dị mfe, n'agbanyeghị oke mmanu ma ọ bụ ihe na-adịghị mma ọrụ ahụ. Inogide ma breathable poli-owu twill eguzo na fading, wrinkles & stains. Anyị na-eme mgbochi T-shirts, mgbochi static Jaketị, mgbochi-static oyi uwe ndị ọzọ na ngwaahịa na-eji petrochemical enterprise ...
Ngwaahịa a adopts atọ-oyi akwa filtration. Usoro mmepụta ihe bụ isi gụnyere gbazee, spunbond, ikuku na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ntanye agịga, wdg, nke nwere ọrụ nke iguzogide mmiri mmiri, ihe nzacha na nje. Complete iru eru, ngwaahịa na-ekwe nkwa, atọ-oyi akwa nyo meltblown ákwà + na-abụghị kpara akwa nchebe larịị dị elu, ọrụ na ụlọ akwụkwọ na-apụ, mgbe niile na-eche nche, pụrụ iche n'oge okpomọkụ ịke, ìhè na breathable, dabara ihu, anaghị atọpụ, ala na-eguzogide , anaghị ejide ume, eriri dị elu na-agbanwe agbanwe, dị mma iji eyi ma ghara agbatị ntị.
Ihe nkpuchi N95 bụ otu n'ime ihe nkpuchi akụrụngwa itoolu nke NIOSH kwadoro. "N" pụtara anaghị eguzogide mmanụ. "95" pụtara na mgbe ekpughere ya ọnụ ọgụgụ akọwapụtara nke ihe nlele pụrụ iche, ihe nkenke ahụ n'ime nkpuchi ahụ ji ihe karịrị 95% belata karịa ntụpọ ahụ na mpụga ihe nkpuchi ahụ. Uru nke 95% abụghị nkezi, mana opekempe. N95 abụghị aha ngwaahịa aha. Ọ bụrụhaala na ọ ga-agbaso ụkpụrụ N95 ma gafee nyocha NIOSH, enwere ike ịkpọ ya "nkpuchi N95". Ihe nchekwa nke N95 pụtara na n'okpuru ọnọdụ nnwale akọwapụtara na ọkọlọtọ NIOSH, nzacha nzacha nke ihe nhicha nkpuchi na-enweghị mmanụ (dịka uzuzu, ikuku acid, alụlụ agba, microorganisms, wdg) ruru 95%.
Disposable ọgwụ na-echebe nkpuchi
Masks na-echebe ahụike dị mma maka nchedo ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ metụtara ya megide ọrịa na-efe efe ikuku. Ọ bụ ụdị nke na - eme ka ndị na - ahụ maka ọgwụ na - echekwa ihe na - ahụ maka nchekwa ahụike nwere nchebe dị elu, ọkachasị maka ikpugharị na ikuku n'oge nyocha na ọgwụgwọ ma ọ bụ mgbe ndị ọrịa na-efe efe na-agbasa site na ụmụ irighiri mmiri na nso nso, ọkwa a nke nkpuchi nwere ike nyocha ihe ikuku na ikuku ma gbochie mmetọ dị ka ụmụ irighiri mmiri, ọbara, oke ahụ, na ihe nzuzo. Filtration arụmọrụ nke na-abụghị mmanu mmanu ahụ nwere ike iru 95 Above% esịmde N95 larịị, nke bụ akacha eji onwe-echebe ngwá maka airborne ọrịa. Ọ nwere ezigbo ihe dabara na ihu onye na - eyi ya na ọ bụ ngwaahịa eji ya otu oge. Ihe nkpuchi nchekwa ahụike nwere ike igbochi ọtụtụ pathogens dị ka nje na nje. WHO na-atụ aro ka ndị ọrụ ahụike na-eji ihe nkpuchi na-echebe ihe na-akpata ihe mgbochi iji gbochie ọrịa nje na ikuku ụlọ ọgwụ.
Ihe nkpuchi ntị
A na-eji ihe nkpuchi a na-ekpofu ekpuchi iji gbochie sprays site na ọnụ ọnụ na oghere imi, a pụkwara iji ya maka nlekọta ọcha dị ọcha na gburugburu ahụike nkịtị. Okwesiri maka oru nlekọta nlekọta ahụike, dịka nhicha ọcha, nkwadebe mmiri mmiri, ihicha akwa akwa, wdg, ma ọ bụ ihe mgbochi ma ọ bụ nchebe nke ihe ndị ọzọ na-abụghị microorganisms pathogenic dị ka pollen.
Ihe nkpuchi bandeeji
Ngwaahịa a na-eji nzacha oyi akwa atọ, nke nwere ike iwepụ ihe nje na-enweghị iku ume gị ma gbochie haze, pollen, na ájá. Complete iru eru, ngwaahịa na-ekwe nkwa, atọ-oyi akwa nyo meltblown ákwà + na-abụghị kpara akwa nchebe larịị dị elu, ọrụ na ụlọ akwụkwọ na-apụ, mgbe niile na-eche nche, pụrụ iche n'oge okpomọkụ ịke, ìhè na breathable, dabara ihu, anaghị atọpụ, ala na-eguzogide , anaghị ejide ume, eriri dị elu na-agbanwe agbanwe, dị mma iji eyi ma ghara agbatị ntị.
Ntuziaka maka iji mkpofu Mwepu akpụkpọ ụkwụ mkpuchi aha ngwaahịa: Mpempe Mwepu Nkpuchi Akpụkpọ ụkwụ Akpụkpọ ụkwụ / Nkọwapụta :dị: maldị Nkịtị (Seams na-enweghị teepu na-ekpo ọkụ), pedị atdị Okpomọkụ (Seams na teepu na-ekpo ọkụ). Ihe mejuputara ihe bu ihe adighi nma, enwere ike wepu ya na akwa ihe eji eme ya (isi ihe). Maka Typedị pedị Na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, a ga-emechi ihe mkpuchi ahụ na teepu na-ekpo ọkụ, ọ nwere nnukwu ike na arụmọrụ mgbochi. Ngwaahịa P ...
Anyị ji obi anyị niile anabata ndị niile nwere mmasị na ụlọ ọrụ maka uru ọ bụla!
Hebei SUREZEN Medical echebe Products Co., Ltd.
23lọ 2303, Tower A, Fortune Building, 86 Guang'an Street, Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei Province.